Bariga Dhexe: Trump iyo guntinta xiisadda ka taagan Gacanka – Kasmo Newspaper
Bariga Dhexe: Trump iyo guntinta xiisadda ka taagan Gacanka
Updated - July 26, 2017 11:14 am GMT
London (Kasmo), Qalalaasihii dibolomaasiyadeed ee 5tii Juun ka dhex qarxay Carabta Khaliijka wuxuu hadda ku sii dhowyahay bishiisii 2aad, tillaabooyinka Maraykanku ka qaadayna waxaa mowqifka Trump loo kala qaybin karaa 2 marxaladood oo kala duwan.
Marxaladda hore, bilowgii qalalaasahaba, Trump iyo maamulkiisu waxay u dhaqmeen siyaabo kala socda oo an isku jaan-qaad ahayn. Pentagon-ku wuxuu 6dii Juun caddeeyay doonitaankiisa xiriirkii Qadar kala dhexeeyay in uu sidiisii hore ahaado, isticmaalka saldhigga Al-Cubaid-na wax is-beddel ah ku dhicin.
Laakiin Trump wuxuu 8dii July la saftay isbahaysiga Sacuudiga ee heshiiska ku gaaray sidii Qadar loo go’doomin lahaa, isaga oo Twitter ku ammaanay dalalkii isku raacay in la jaro taageerayaasha argagixisada. Marxaladda 2aad, Trump wuxuu qaatay mowqif ka fudud midkii hore, wuxuuna bilowgii July taleefan kula xiriiray hoggaamiyeyaasha Sacuudiga, Imaraadka iyo Qadar, si xiisadda loo qaboojiyo.
Maraykanku wuxuu dhinacyada oo idil ka codsaday in ay wada hadal ka yeeshaan, sidaasna wuxuu ku noqday mid dhexdhexaadiye ah. Dalkii u dambeeyay ee Gacanka oo Trump la xiriiro wuxuu noqday Cumaan, oo 8dii July taleefan uga codsaday Suldan Qaabuus sidii looga hortagi lahaa is-ballaarinta Iiraan ee Gobolka.
Aaron David Miller & Richard Sokolsky waxay Wargayska Foreign Affairs ku sheegeen in dhexgalka qalalaasaha Gacanku dani ugu jirin mowqifka Maraykanka ee Bariga Dhexe. Bal iska daaye Washington waxay dhexda ka gashay colaad xun oo ka dhex oogantay jaalkeedii Istrateejiga ahaa ee Gacanka, gaar ahaan Sacuudiga iyo Qadar oo hadda sii kala fogaanaya.
Maraykanku wuxuu Gacanka ka leeyahay 3 dano oo waaweyn: a) ka hortagista is-ballaarinta Iiraan, b) la-dagaallanka argagixisada iyo j) in an arbushaad la galin socodka xorta ah ee Saliidda iyo ganacsigeeda. Sida ay Miller iyo Sokolsky sharraxayaan, midina danahaasi, qalalaasaha Gacanka ee hadda socda, halis kuma hayo.
Waxayna la tahay in, natiijo kasta oo ka soo baxda is-mariwaaga, midkoodna sacuudiga iyo Qadar, aanay is-kaashigii Istrateejiga ahaa ee USA joojin doonin, qulqulka saliidda Gacanka iyo Maraykankana halis gali doonin.